Nzira Nhatu dzeKuona Kuti Yako Diki Screen Inobatanidzwa iri Kuva Nechikuru Mhedzisiro | Martech Zone
Pasina mubvunzo denda rakachinja maitiro ekutenga kwevatengi uye zvinotarisirwa zvinotungamira vatengesi kuti vawane nzira nyowani uye dziri nani dzekuita online. Pamusoro pekuwedzera kwekushandisa pamhepo mu2020 - kukwira 44% kubva 2019 kune anopfuura $ 861 bhiriyoni muUS - pakave nekuwedzera kukuru mumasarudzo ekuzadzikiswa epamhepo, ne 80% yevashambadziri kutarisira kuwedzera mashandisiro avo eTenga-Online-Pickup-In-Chitoro (BOPIS) uye curbside pickup uye 90% ikozvino yasarudza kuendesa kumusha pane kushanya kwechitoro.
Vatengi vari savvier kupfuura nakare kose kana zvasvika pakutenga kwepamhepo uye izvi zvitsva uye zvakawedzera zvekutenga zvekutengesa mune yanhasi yedhijitari-yekutanga online nyika ichave neyakareba mhedzisiro. Ndosaka mabrandi achifanira kuve nechokwadi chekuti yega yekubata inoonekwa-yekutanga, inokurumidza, uye isina chaipo, zvisinei kuti vateereri vavo nevatengi vari kuitirei. Tichifunga izvozvo vangangoita 80% yevanoshandisa smartphone izvozvi vari kutenga pane zvavo nharembozha, pane mukana mukuru wekupa kune vatengi 'diki skrini zvigadzirwa.
Simba rezvidzitiro zvidiki rinotakura zvimwe zvisiri-zvidiki-mabhenefiti kusanganisira kuwedzera kubatanidzwa, kutendeuka, uye kwenguva refu brand brand. Mhando dzinofanirwa kutarisisa kune matatu chaiwo maitiro - micro-vhidhiyo, microbrowsers uye mobile optimization - kuona kuti vari kunyatsosvika nhamba inokura yevatengi vepamhepo.
Munguva yeTikTok uye Instagram Reels, vatengi vanoziva zvidimbu zvidiki zvevaraidzo kana ruzivo pane yavo nhare mbozha. Mabhandi anofanirwa kuisa mari pachimiro ichi nekugadzira zvidiki-vhidhiyo clip izvo zvinokasira kutora kutarisa kwevaoni uye zvinoita kuti vagare vachifara uye vachiita basa. Nemaminetsi mashoma ezvinyorwa, zvigadzirwa zvinogona kuburitsa meseji inokwezva iyo inowedzera maonero nekutendeuka.
Micro-vhidhiyo yezvinyorwa inowanzo ingori masekondi gumi kusvika makumi maviri pakureba, zvinoreva kuti mabhureki ane pfupi pfupi yenguva yekuona kuti yega clip inounzwa zvisina musono uye kune kwavo kuzere kugona. Kuti uwane izvi, zvigadzirwa zvinofanirwa kutanga zvaita chokwadi chekuti zvemukati zvinogadzirisa kuzadza skrini yeese mudziyo, ingave iri desktop desktop, piritsi kana nhare mbozha. Zvese zvirimo zvinofanirwa zvakare kugadziridzwa kune portrait kana nzvimbo yekudzivirira static sizing iyo inogona kutyora peji marongero, kukanganisa mufananidzo kana kuratidza matema mabara akatenderedza vhidhiyo. Vashambadziri uye vanogadzira vanogona kushandisa AI uye kugona kwemuchina kugona kunyatsogadzira akasiyana akasiyana evhidhiyo yega yega inodiwa kune yega yega saizi saizi, maitiro uye chishandiso.
Pamusoro pezvo, vashambadziri uye vanogadzira vanofanirwa kunyatso cherekedza zvinyorwa zvinoenderana nevhidhiyo yega yega, kusanganisira iwo musoro wenyaya uye zvinyorwa zvidiki. Izvi zvakakosha zvinhu zvemukati zvinopa mamiriro kune muoni, kunyanya kubvira 85% yemavhidhiyo zvemukati yakaonekwa paFacebook inoonekwa pasina kurira. Uye zvakare, kupa chaiyo zvinyorwa zvidiki zvakakosha kutevedzera kugona uye ADA nhungamiro. Iko kushandiswa kweAI kunogona zvakare kugadzira zvinyorwa uye kuisa zvinyorwa kuvhidhiyo yega yega.
Sunga Simba reMicrobrowsers
Microbrowsers ndiwo madiki ekuratidzira saiti iyo inowanda mukati mehurukuro mune zvakavanzika mameseji maapplication seSlack, WhatsApp uye Facebook Messenger. Semuenzaniso, funga nezve pawakatumira amai vako iMessage link kune bhutsu pane yako yekuzvarwa shuviro runyorwa. Webhusaiti yemutengesi inogadzira yega inoenderana nemufananidzo kana vhidhiyo yekutarisa. Izvi zvinomubatsira kuti aone kuti chii chinobatanidza uye anovaka yakanaka yekutanga chiratidzo chechiratidzo, ichiwedzera mukana wekuti achabaya nekutenga iwo mabhutsu sechipo.
Izvi zvinongedzo zve microbrowser zvinopa mukana wakakura wekubata uyo mabhureki nhamo anowanzo tarisa. Mabhandi anofanirwa kuona kuti aya ekuona mifananidzo kana mavhidhiyo anoratidzwa zvakaringana pane ese chat uye mameseji maapplication, pamwe nemuswe murefu wezvimwe zvikwangwani semidziyo yemitambo yakabata nemaoko uye zvishandiso zvemagetsi.
Vagadziri vanofanirwa kuve nechokwadi chekuti zvinongedzo zviri kusununguka mukati me microbrowsers na:
Kujekesa zvese mukati meiyo HTML markup, uye kudzikamisa zita kune gumi mazwi uye tsananguro kune 10 mavara
Kugara uchishandisa Open Girafu seyumaki kune account kune ma microbrowser akasiyana
Kusarudza chakasarudzika chifananidzo chinoratidzika zvinoyevedza uye chinomanikidza iye anogamuchira kuti atsvage kuti uwane rumwe ruzivo
Uchishandisa ipfupi vhidhiyo "nanostories" kune mashoma ma microbrowsers ayo aripo kuratidza vhidhiyo
Nekutevera aya matipi, mhando dzinogona kushandisa zvakanyanya yavo microbrowser zvemukati uye kutyaira vezera-kune-vezera kurudziro dzinotungamira kune kudzvanya nekutengesa. Pamusoro pezvo, ivo vanogona kushandisa iyo data kupa ruzivo rwevateereri maitiro uye zvavanofarira, pamwe nekuti yakawanda sei traffic iri kuuya kubva kune vezera kutumira, kana "yakasviba magariro." Iyi isina kunangana microbrowser traffic mukana wegoridhe kune vatengesi - iyo yakawanda data yavanayo pane vari kugovana zvinongedzo kuburikidza zvakavanzika zvikamu uye mapoka ehurukuro, zvakanyanya ivo vanogona kuwedzera izvo zvirimo uye simba rekutumira.
Gadzira iyo Saiti Nhare-Inoshamwaridzika
Sezvo vatengi vachivimba nekutenga pamhepo zvakanyanya uye nekuwedzera, zvave kunyanya kukosha kuti mabhenji ape midhiya-akapfuma ewebhu zvemukati zvinotakura zvakanaka pafoni nhare. Vatengi vari kutsvaga chiitiko chinobatika uye chakarongedzwa icho chinokurumidza uye chinoteerera. Ivo havamirire vakatenderedza kuti peji riite. Muchokwadi, kunonoka-sekondi imwe mukupindura peji kunogona kukonzera 16 muzana inoderera mukugutsikana kwevatengi.
Mhando dzinofanirwa kutarisa pahunhu, fomati uye saizi yeavo edhijitari zvinhu kuendesa pane izvi zvinotarisirwa. Zvemifananidzo, vagadziri vanofanirwa kushandura mifananidzo yematanho akasarudzika, vachigadziridza kune saizi yemukati, resolution uye dhizaini kuti ikwane nharaunda yekushandisa. Izvo zviyero zvinoshanda kune vhidhiyo, nepo zvakare uchifunga nezve mhando yeiyo vhidhiyo kuti ugone kune yemushandisi network mamiriro. Nekuita kuti webhusaiti ive nhare-inoshamwaridzika, zvigadzirwa zvinogona kuva nechivimbo chekuti vashandisi vanonakidzwa neruzivo rwekushambadzira pamhepo pachiitiko chinotyaira traffic uye kutengesa.
Mhedzisiro Huru Inouya Kubva Kudiki Diki
Izvo zvave kuwedzera kukosha kune zvigadzirwa kuti zvinyatso tarisa pane yavo diki skrini zano uye kuona kuti ivo vari kupa kune vashandisi ve mobile. Kupinza micro-vhidhiyo, microbrowser, uye mobile optimization maitiro akanakisa ichave yakakosha kuzadzikisa zvinotarisirwa nevatengi vemazuva ano online uye kuhwina mibairo mikuru mu mobile world.
Tags: ai videofacebook messengerInstagram Reelsmicro-mabhurawuzamicro-vhidhiyomicro-vhidhiyo clipmicrobrowsersnhare yekuitamobile optimizationnharembozha peji kumhanyanhare inopindurakukurumidza kumhanyamobile videonhare-ine hushamwaripage speedwiriranashort videousimbediki skriniTikTokfomati yevhidhiyodhizaini yevhidhiyosaizi yevhidhiyowhatsapp